Ozinina fanangonam-bokatra laboratoara - Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovam-pambolena any Sina
Rotary hafainganam-pandeha: 2800r/min
5XQS-L laboratoara destoner ho an'ny voan-javamaniry varimbazaha sesame chia
Ny 5XQS-L Destone dia ampiasaina indrindra amin'ny fanasarahana ny voa kely (voa legioma, voan-javamaniry ary voan-javamaniry) sy vato. Izany dia ny fampiasana ny gravité manokana sy ny hafainganan'ny fampiatoana ny voam-bary sy ny vato. Raiso ny fomba fiasan'ny Rivotra sy mekanika, hanesorana ny fasika sy ny loto mavesatra hafa. Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny karazana voa rehetra mba hanesorana ny vato sy ny poti-tany, hahazoana ny voa matanjaka.
5XWY indented varingarina halavan'ny grader vary manasaraka milina amin'ny halavany
Ny cylinder indented amin'ny laboratoara dia ampiasaina hanasaraka ny voa sy ny fitaovana hafa amin'ny fahasamihafan'ny halavany.